प्रकाशित मिति : २०७४, १९ आश्विन १०:३४
बल्ल बल्ल ६ घण्टाको हवाई यात्रा पश्चात् पुगियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल, काठमाडौँ । लगभग ५ सय दिन बिदेसिय पछि आज स्वदेसि हुँदै छु । आज मनमा अचम्मैको एउटा खुसीयाली छाएको छ जस्तोकि उ बेला बा ले हाट गएर ठेट्वाको भोटि अनि खाकि को जुत्ता ल्याई दिए झैँ भएको छ । एक पटक बुरुक्कै उफ्रिय भित्र भित्रै र लागे आफ्नो लगेज घिसार्दै बाहिर पट्टि । काठमाडौँ बाट मेरो घर अलि टाढा भएकोले मलाई रिसिभ गर्न कोही आउनु भएको थिएन, मैले बोलाको पनि थिइन । उसो त काठमाण्डौमा कोही नभाको पनि होइन । मलाई जति सक्दो छिटो घर पुग्नु थियो । अब जो कोही पनि रिसिभ गर्न आए एक दिन मैले उसकोमा खर्च गर्न पथ्र्यो त्यसैले कसैलाई पनि म आफैले खबर गरेको थिइन ।
बाहिर निस्केको मात्र के थिए, एउटा करिब २५–३० वर्ष को जस्तो दखिने पूर्वेलि दाजु यात्रु फकाउने कला सहित मेरो सामु हाजिर भए । समाचारमा आजकल ट््याक्सि ड्राईभरले लुटेको घट्न छ्याप्छ्याप्ति भेटिन्छन् तर पनि खै किन किन मलाई उसको विश्वास लाग्यो । मैले अनुमति दिए पछि उसले मेरो लगेज आफ्नो गाडीको पछाडि राख्यो र मलाई अगाडिको सिटमा बस्न इसारा ग¥यो । अनि हुईकियौ बसपार्क तिर । उ बेला बेलामा होटेल तिर जाने कुरा गथ्र्यो । अझ भेज, नन भेज सबै सुविधा भएको, पुलिसको पनि डर नहुने होटलको आफूलाई जानकारी भएको बताउथ्यो । मैले उसको कुरामा वास्तै नगरी बसपार्क आईपुग्यो । वास्ता गर्न नि जरुरी ठानिन किनकि मलाई आजै जसरि भएनि बस चढ्नु थियो ।
रात्रि बस । काठमाडौँ नेपालगञ्ज रात्रि सेवा ।
यहाँ पनि उता विमास्थल झैँ मान्छे फकाउन सकेको कोसिस गरिरहेका थिए । कोही भन्दै थिए नन स्टप डिलक्स, कोही खाना पिना फ्रि,,कोही कोही त….. पनि फ्रि ।
म यो सब सुन्नेमा थिइन । यता सँगै स्कुल पढ्दाको साथी अस्ति च्याटमा आजकल म गाडीको साँहु भएको जानकारी गर्दै थियो त्यही बेला उसलाई म आजको मितिमा नेपाल आउने सङ्केत दिएको थिए । उसले पनि धेरै पछि भेट हुने र स्मरणीय हुने भन्दै उ बेला नै खुसी व्यक्त गरेको थियो । मलाई थोरै मात्रामा आस थियो भेट हुन्छ । नभए आजकालका साथी, साथी नाममा मात्र सीमित भएको देखेको छु । विदेशमा एक पल्ट आफैले भोगेको हुनाले पनि आजकल दोस्तिमा खासै भर नलागेको हो ।
म गाडीको चियो गर्दै छेवैमा भएको किराना बाट धुमपान सल्काउदै छु । आजकल त नेपालमा यो धुमपान गर्न पनि साह्रै सकस । खुद्रा पाउदैन पनि भन्न सुनेको थिए । तर चप्पल चोरलाई पुलिस लगाउने र देशको भ्रटचारिलाई सरकारकै संरक्षणमा सुरक्षा दिने देशमा यस्ता नियम सायदै कसैले पालन गरोस तथापि सरकारको यो नियम गलत भन्न खोजेको पनि होइन कि यी र यस्ता कुलतलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको तर मान्छे अनजान भन्दा नि जाना जान बिग्रिरहेको हुन्छ नत्र हानिकारक छ सम्भवत होस समालेको जो कोहीलाई पनि याद छ तर दिन रात कुलत कै व्यापार फस्टाएको छ अझ हाम्रो बिडमबना भनौ देशको प्रमुख राजस्वको हिंसा पनि यही बनेको छ ।
मैले पनि राजस्वमा केही सहयोग गरे एक प्याकेट सूर्य खरिद गरेर अनि नजिकै धागोको सुरक्षा घेरमा राखिएको लाईटरले विदेशमा बगाएको पसिनामा आगो लगाए, लामो श्वास भित्र लिए अनि एक छिन भित्रै राखी केही बेरमा उडाए आकाश तर्फ………..।
भित्र लिदा धुवा मात्रै लिएको थिए निस्किदा त्यो धुवा मात्र नभई मेरो आयुको केही हिंसा पनि उडेको थियो । केही बेरमा अस्तायो सूर्य अनि अन्त कतै आगो नपैmलिने हेतुले जुत्ताको साहारले २र३ पटक मज्जैले कुल्चिदिए ।
अब खोजी गाडीको गर्नु थियो लागे काउन्टर तिर ।
केही कदम बाँकी थियो पुग्न काउन्टर सम्म कतैबाट धमिलो स्वरमा मेरो नाम उच्चारण भयो , मैले सोचे मेरै नामको कुनै चालक होला नभए मेरो यहाँ गुरुको परिचय त थिएन होस पनि कसरि बडामुस्किलले प्रदेश जाने साईतले गर्दा काठमाडौँ देख्न पाएको थिए । तर धेर थोर भने मेरो कामसँग परिचित थिए । सोचे ती मध्ये कै कोही होला । यदि मलाई नै आवाज दिएको हो भने, नभए मेरो जस्तै नाम भएको अरू पनि त हुन सक्छ नि ,दोधारमा भए कस्लाई होला त ?
त्यो दोधारलाई एकधार गर्न लाई पछाडि फर्के । उसले मलाई परिचत हुन नदिई मेरो लगेज उठायो र गाडी छुट्न आट्यो भन्दै आफ्नो पछि आउन आग्रह ग¥यो । म के गरु के गरु मा अन्यौल भए तर अब उसको पछि लाग्नु को विकल्प पनि थिएन किनकि मेरो जे सम्पति थियो त्यो लगेज, उसको हातमा थियो । अलि छिटो छिटो पाइला उचालेर उसको पिछा गरे । मेरो लगेज डिगिमा राख्दै थियो मैले भने तपाईँले गलत मान्छेलाई उठाउनु भयो ।
तपाईँ रमेश गुरु होइन र? उसले फेरि अघिको आवाज रिपिट ग¥यो । रमेश त हो तर गुरु होइन मैले भने । यति भनेसि उसले अङ्कमाल ग¥र्यो र भन्यो, मान्छे विदेश बाट आएपछि मान्छे पनि नचिन्ने है ? उ गुनासो गर्दै थियो तर मैले अझैं नि याद गर्न मुस्किल भएको प्रमाण पेस गरे र भने, प्लीज सरि मलाई याद गर्न गा¥ह्रो भयो ।
उसले छोटकरिमा भन्यो तमेल को भिरमा हाम्रो गाडी ठोकेको हिसाब गर्न बाँकी छ गाडी भित्रै गरौला जाऊ, उ अघि लाग्यो मेरो । सिटमा पुगेसि मैले भने तिमि रामु हो ? उ हास्यो मात्रै म रामु नै भएको निश्चत भएर उसलई बेसरी हग गरे ।
लामो हासो गुन्जियो हामी दुईको ।
तत्पश्चात उ आफ्नो सिटमा गयो । उ रामु पो रहेछ । रामु अधिकारी । आजकाल आफुनै चालक भैसकेको रहेछ । खुसी लाग्यो । केही पश्चताप पनि भयो चिन्न नसकेको मा ।
म आउदैछु भन्ने तिमीलाई जानकारी थियो र ?
ए त्यसले पो हो ?मैले उ सँग च्याटमा कुरा भको जानकारी गराए ।
त्यस पछि उसले आफ्नो औपचारिक्ता पुरा गर्‍यो ।
जस्तो कि, हामी नभेटेको धेरै भयो । कति भयो बाहिर गएको ? मैले फेसबुकमा धेरै सर्च गरे कतै पनि भेटिन । कस्तो थियो काम काज, कमाई त राम्रै हुन्छ भन्छन् त्यो काममा ? फेरि जाने गरेर आउनु भएको कि अब नजाने ?
मैले उसको सबै उत्तर अलि बढाइ चडाई गरेर दिए । किनकि उ मेरो कुराले निराश नहोस म चाहान्थे ।
नेपालमा गाडी चलाएर पैसा कमाउन सकिएन अलि राम्रो कम्पनीमा भिसा मिलाई दिन आग्रह नि गर्दै थियो । मैले भने पैसा यहाँ को नि उस्तै हो त्यहाँको उस्तै हो । कमाउनेले यहाँ पनि कमाकै छन् । फरक यति हो यहाँ सुखको कमाई हो विदेशमा दुखको । काम जस्तो सुकै होस कमसेकम आफ्नो बोली भाषा त मिल्छ, रहन सहन त मिल्छ कम्तीमा उसले माया गर्दै छ या गाली गर्दै छ त्यो त बुझिन्छ । खास कुरोे समुन्द्र किनारामा सुकिला लुगा लगायको फोटो फेसबुकमा अपलोड गरेको जस्तो छैन विदेश । मान्छे तस्बिरमा मुस्कुराए को त देखिन्छ तर त्यो मुस्कान भित्रको पिडा जो विदेशमा पसिनालाई पैसा र आफ्नो भविष्य सँग साटिरहेको छ उसैलाई मात्रै थाहा छ । उसो त सबैलाई दुख छ पनि भन्दिन म तर सुख पाउने सायदै होलान् ।
कुरा कै क्रममा हामी धार्के पुगिसकेका रहेछौ । खाजा खानलाई गाडी रोकियो । सबै आ आफ्नो साँझको नित्य कर्ममा लागे । भन्नाले यात्राको क्रममा गाडी रोकिदा गरिने । सौच, पान अरू पनि ।
म भने रामुकै इसारामा उसको पछि लागे । उता बाट साथीको लागि भनेर चुरोट बोकेको थिए कोसेलि दिने मौका जुट्यो । एक प्याकेट उसको अगि राख्दिए । म भने बसपार्कमा किनेको सूर्य तिरै लागे । यति बेला म चुरोट मात्रै भएनि स्वदेसि उत्पादनलाई प्रथामिकता दिनु पर्छ भन्नेमा देखिन्थ्य । तर कारण भने त्यो होइन । स्वदेसिलाई पहिलो प्रथामिकता दिनु पर्छ यसमा म शत प्रतिशत सहमत छु । यसरि नै हो देशको विकास हुने पनि । तर विडम्बना आफ्नो स्वर्ग जस्तो घर बेचेर कोठा भाडा तिरेर बस्ने चलन सिकेका छौ । घरको ताजा बेचेर प्याकेटको खान सिकेका छौ आजकल त मिठो पनि त्यही प्याकेटको लाग्छ बानी जो परेको छ ।
आफू केही गर्न मन गर्दैनौ अनि दोष जति देशलाई दिन सिकेका छौ । अनि विकास कसरि हुन्छ ? देश कसरि बन्छ ? तर देश बनाउने जिम्मेवारी पदमा आसिन ज्यू हरू सबै बफादर छन् पनि म भन्दिन ।
खाजाको भुक्तानी त गर्नु नपर्ने रैछ स्टाप भएको नाताले तर नि यसो भाउ कति वृद्धि भएछ भन्ने हेतुले छेवैको टेबुल माथि राखिएको मेनुमा नजर डुलाए ।
खाजा घरको नाममा यात्रु बाट पैसा लुटेको समाचार बेला बेलामा छाईरहन्छ मिडियाहरुमा, विशेष धार्के ।
खजा खाईवरि सूर्यलाई आगाले पुन जलाउदै मैले भने,
कति महङ्गो हो यार खाजा पनि बरु खाना सस्तोमा पाइन्छ ।
खाजाको रु ३०० तर खाना रु २५० मा पेटभरि पाइन्छ ।
रामु आफू अनबिज्ञ बन्यो ।
मैले सुनेको थिए गाडीका स्टाप पनि मिलेका हुन्छन् । अझ यात्रुलाई आफ्नो होटेलमा ल्याएको बापत केही कमिसन पनि दिन्छन भन्ने ।
मैले साथी सोचेर यही प्रश्न गरे उसले नि साथी नै सोचेर स्वीकार्यो कमिसन पाउने गरेको ।
उसले भन्यो, अलि अलि यही आउँछ रत खर्च गर्न पुगेको छ नभए त तपाईँ लाई नि थाहा छ नि तलब त कति हुन्छर ।
मैले पनि सहमत जनाए आफू पनि जानकार भएको ।
सोचे मनमनमै, कस्तो अचम्म छ है सबै कुरो सेटिङमा चलेको छ । साँहु लाई पनि यी सब थाहा छ र पो उसले नि उही अनुसारको पारिश्रमिक दिएको छ । बिचारा सबैको हाल उस्तै छ कस्लाई ठिक्क भो भन्नु कस्लाई बिचारा भन्नु ।
यस्तो पनि भएको छ कि साँहुले गाडी किनेको केही दिनमा गाडी त गयो गयो भएको अरू नगद जिन्सि पनि सकेको तर उता ड्राईभर ले घरको तला थपेको । यस्ता नमक हराम पनि छन् । यसरि कमाको कतिञ्जेल पुग्छ त्यो उप्पर वाला लाई नै थाहा होला तर यो चाहिँ गर्न नहुने काम हो ।
पुन यात्रा शुचरु भयो । करिब करिब घडीको छोटो काटाँ ७ मा टेकेर माईलो काँटालाई १२ कटाई सकेको थियो । बाख्रा पाठा बाघ लाई, बुढा खाढा माघ लाई भन्ने कुरा सबैलाई अवगत थियो क्यारे ज्यान बुढो नभए पनि माघ बाट बच्ने जमर्को गर्दै थिए सबै यात्रु । कोही पछ्यारि भित्र आफूलाई बेर्दै थिए कोही जकेटको कलर माथि सम्म तान्दै थिए त कोही पछ्यौरिमा आफू पनि अटाउने भन्दै अनुमति लिदै थिए त्यो चुन्निको मालिक सँग ।
म पनि ऐजन गर्न लागे । जाने बेलामा यतैबाट लगेको थिए माउन्टेन को ऐर प्रुफ । उता गर्मीमा जकेटको जरुरी नहुने भएकोले प्रयोग भने गरेको थिइन । लगभग एक पटक पनि लगाएको हैन उता गएर त्यसैले ताजै थियो । चिसो भए ओड्नु भनेर बलाङकेट दिएको थियो रामुले । मलाई त जरुरी थिएन साइडको अपरिचित बहिनीको पछ्यौरि नभएकोले त्यो उसलाई दिई आफ्नो पावर सो गरे । उसले पनि गुन मानेर यदि मौसमले च्यालेन्ज गरे निर्बाद मलाई पनि प्रयोग गर्न दिने अनुमति दिएकि थिई । त्यति उसको मानवताले भने पनि म त्यो अफर स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा भने थिइन तर माघको अघि मैले हार माने र स्वीकार गरे केही छिन मा ।
नारयणगढ कटि सकेको थियो, उता विदेशमा सँगै बसेका थियौ शनि बाबा, यही चितवनको । उसलाई पनि मिस गरे ।
अर्कै मुलुक बाट, रामुले जवाफ दियो तर सोधिएको मलाई थियो । मैले बुझे उ बोल्न बाहाना खोजिरहेको रहेछ । यतिकैमा भाउजुले हाम्रो अगाडिको टेबलमा चिया पु¥याउदै बोलिन सिया पनि कि चिया मात्रै ? रामु केहि ईत्तरिन खोज्दै थियो तर मैले भने सियाको बेला भाको छैन बरु लाईटर दिनुन प्याकेट बाट चुरोटको खिल्लि निकाल्दै भने । अर्को टेबलमा भएको लाईटर दिईन र आफ्नो काममा ब्यस्त भईन । रामु केहि जिज्ञासा राख्दै थियो भाउजुको बारेमा मैले उसले सोचेको जस्तो नभएको उत्तर दिए । एक एक कप चिया र एक एक खिल्लि चुरोट सकेपछि सियाको लागि फेरि आउने बाचा गर्दै त्यहाँ बाट बिदा भईयो । झन्डै आधा घण्टाको यात्रा पश्चात मेरो घर आई पुग्यो । मेरो घर मेन बाटो बाट अलि भित्र पट्टिको बाटो मा भएकोले उ मेरो लगेज को खातिर घर सम्मै जान्छु भन्दै थियो मैले घर सम्म लगेज आफै लान समस्या नभएको भन्दै उसलाई ईन्कार गरे । फोनमा बार्तालाप अनि बेला बेला भेटघाट गर्ने सहमतिमा अङमाल गरेर हामि छुट्टियौ ।
मेन बाटो बाट करिब पचास÷सय मिटरको दुरिमा घर छ मामाको र बिचमा बबई सिचाई आयोजनाको नहर छ । नहर अलि अग्लो छ घर भएको भुगोल भन्दा । नहरमा सहजै मान्छेको आवत जावतको लागि पुल बनाईएको छ ब्यक्तिगत लगानिमा । स्वागतम लेखिएको बोर्ड देखियो त्यहि पुलमा उक्लेसि । जे भए पनि बेहुलाको घर हो सके जति मेहनत सँग सजाईएको थियो । आँगनको बिचमा हरियो बाँसको लामो लिङ गाडेर त्यसैलाई केन्द्र बिन्दु बनाई घरको वरिपरि पतङ टाङिएको थियो । घरमा पनि चमकदार रङले पोतिएको थियो । मुल गेटमा दाँया तिर बशन्त परिरणय ऋतु लेखिएको रातो कालो भुईमा रातो टिक टिक भएको बिएमडब्लु र त्यसमा आवस्यक सिङारपटार गरिएको कार पार्क थियो । मान्छेको विशाल जमघट जसमा म कोहि कसैलाई मात्रै जान्दथे त्यसैले सिधै मामाको कोठामा गए शुभकामना सहित बिदेश बाट उपहार स्वरुप ट्याब ल्याईको थिए, केहि औपचारिक गन्थन भए । मन हर्षित भयो । मामाले पनि आफु असाध्यै खुशि भएको बताउनु भयो । जन्ति जानलाई बिशेष मेरो नै प्रतिक्षा गरेको पनि भन्नु भयो । म जति प्यार गर्छु सम्भबत मलाई नि उति नै गर्नु हुन्छ त्यसैले म मङिशरमा नेपाल आउन नपाउने भएसि बिहे नै सारेर माघमा हुदै थियो ।
शरिर पे्रmस हुन्छ त्यो त ठिकै छ अनि दिमाग चै किन फ्रेस हुनु पर्यो र ? उसले जिज्ञासा राखि अब पालो मेरो थियो उसको जिज्ञासालाई मेट्नु पर्ने । थोरै हास्दै मैले भने आज रात भर मेरो कुराले ह्याङ भएको होलानि त त्यसलै, मलाई थाहा थियो उ यस्तै केहि जवाफको आशा राखेकि थिई नभए उसले यो जिज्ञासा राख्न जरुरि नै थिएन नि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अझ भनौ केहि आफुलाई मन नपरेको कुरा भोग्नु पर्यो भने सबैले भन्छन एक छिन म सँग नबोल्न यार मेरो माईन्ड ह्याङ भाको छ एक छिन फ्रेस हुन दे भनेर । उ पनि यो कुरा जान्दथि तर पनि जिज्ञासा राखेसि अरु के आशाले होला र त्यसैले भन्दिए । उ पनि थोरै मुस्कुराउदै सहमति जनाई । एउटा पछ्योरि मेरो हातमा थमाईदि एउटा आफुले आडेर घरको छत तिर उ अघि अघि म पछि पछि उक्लियौ । बाहिर कुहिरोले टमक्क ढाकेको थियो । नजिकैको मान्छे पनि चिन्न गाह्रो पर्ने खालको । त्यस्तै कानमा सिररर मसिनो बतासले चुम्मन गर्दै हामि बिच छेवैको पल्लो घरको भित्तामा ठोकिदै पुन हामिलाई नै चुम्न आउथ्यो । मैले कोट भित्र हातले बुनेको हाफ सुईटर पनि लगाएको थिए अनि पाईन्टको भित्र ट्राउजर को सहायताले आफु यो चिसोलाई सकभर पन्छ्याउने ब्यवस्था गरेको थिए त्यसैमा उसले एउटा पछ्यौरि पनि दिएकि थिई तर उ भने खासै त्यस्तो मेरो जस्तै बन्दो बस्ति मा थिईन । कलेजि कलरको कुर्तामा त्यस्तै तर अलि गाडा बुट्टा भएको सलवार अनि कुर्ता माथि अलि लामो कोरियन कोट मात्रै र यि सबैलाई कालो मखमलि जस्तै पछ्यौरिले आधा टाउको पनि ढाकिने हिसाबले छोपेकि थिई । माथि तिर भित्रि बस्त्र हाईनेक नलगाएको मैले प्रस्ट देखे पनि, मैले जस्तै उसले पनि ट्राउजर लगाएकि थिई या थिईन उसैलाई थाहा होला तर मलाई मुटु देखि नै कमाईरहेको चिसो उसलाई एक रत्ति पनि भैरहेको थिएन । सुनेको थिए केटिहरु हट हुन्छन हो रैछ यो अवस्थामा उसलाई देखेर स्वीकार्न बाध्य भए ।
म पनि त्यस्तो पेशेवार कहाँ थिए र लगभग झुम्म पारिसकेको थियो । केहि सोमरसको नशा, केहि अनिदो यि सबै भन्दा उर्मिला सँगको भेटको खुशि ले होला सायद सोमरसको आफ्नो निश्चित नशा भन्दा केहि बढि नै नशा चडेको थियो म मा । आखिर शराब पनि आफैमा नशालु कहाँ हुन्छर । यो त आफुमा नामैले परिचित छ कि यसमा नशा हुन्छ । खाश नशात त्यसको लाग्छ जो मनमा हुन्छ । जो दिामागमा हरपल छाहिरहन्छ । जो कल्पना अनायसै आईदिन्छ । शराब त एउटा नशालु भैदिने बाहाना मात्रै हो नभए यदि नशा शराबमै हुन्थ्यो भने ति शराबले भरिएका बोतलहरु पनि त नाच्नु पर्ने । ति राखिएका ¥याकहरु बाट निस्किएर कतै नालिमा पल्टिनु पर्ने जसरि एउटा शराबि सब थोक बिर्सेर रातभर चिसो नभनि, फोहोर नभनि, रोडको नालिमा लडिरहेको हुन्छ । नभए ति बोत्तलहरु प्नि त रुनु पर्ने जसरि एउटा प्रेमि बिछोड भएको सालौ पछि सम्म पनि शराब पिए पछि उसैको यादमा रुने गर्दछ । यस्तै यस्तै बेमतलबि कुरा सोच्दै निदाए छु म पनि । आखिर यस्ता हावा गफ मनमा आउने पनि यस्तै माहोलमा रहेछ ।
एक छिनसम्म अनलाईनमा पनि हेरे उसको केहि म्यासेज आएन । उठु या सुतुमै धेरै बेर सम्म रुमालिरहे । यत्तिकैमा जुरुक्क उठेर बाहिर निस्के । धाराको छेवैमा मामा मन्जन गदै हुनुहुन्थ्यो । म पनि सरासर धारामा गई मुख धोईवरि आए । घरका अरु मान्छे पनि सबै ब्यस्त थिए हिजोका सामानहरु ब्यवस्थित गर्नमा । मामासँग बिदा मागे । मामाले खाना खाए पछि मात्रै जानुहोला भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर मलाई अब पटक्कै बस्न मन भएन । बिदेशबाट साथिको सामान ल्याएको थिए त्यहि लिन घरमा मान्छे आएको झुटो बाहाना बनाए । उर्मिला पनि सायद केहि भन्न खोजिरहेकि थिई तर म उसको आँखाको भावलाई बुजेर पनि अन्जान बन्न बिबश थिए । अझ भनौ अब बुजेर पनि के गरु । बढिमा बढि खाना खाएर जानुहोला भनेकि होलि तर अब खाना पनि त रुच्नेवाला थिएन ।